Fanafihana ny fiaran’ny Brinks: telo lahy nidoboka eny Tsiafahy | NewsMada
Telo lahy izao no fantatra fa naiditra am-ponja eny Tsiafahy, noho ilay raharaha fanafihana ny fiara mpitondra vola an’ny orinasa Brinks, teny Amoronakona, By-pass, ny asabotsy teo. Anisan’izany ilay tompon’ny moto nampiasaina nandritra ilay fanafihana, lehilahy iray mpiasan’ny tobin-tsolika Jovena izay nitsimpona ka nanitrika ny findain’ireo jiolahy nandritra ny fifanjevoana, ary lehilahy iray hafa.
Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ireo olona telo voarohirohy ho tompon’antoka sy tao ambadik’ilay fanafihana ny fiaraben’ny orinasa Brinks hanatitra vola teny amin’ny banky iray eny Amoronakona By-Pass. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary, ny zoma hariva tamin’ny fotoana nitrangan’ny fanafihana dia efa voasambotry ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Andoharanofotsy noho ny fiaraha-miasa tamin’ny zandary avy ao amin’ny borigadin’Ambohimangakely ny lehilahy roa tompon’ilay moto nampiasana nandritra ity fanafihana teny Amoronakona By-Pass ity. Nambaran’ny fampitam-baovao avy amin’ny zandary hatrany fa voasambotra ny ampitson’io nitrangan’ny fanafihana io koa ny lehilahy iray mpiasan’ny Jovena izay naka haingana ny telefaonina findain’ireo mpanafika izay latsaka teo am-pandosirana ka nanitrika haingana ilay telefaonina finday. Tsiahivina fa ny zoma lasa teo no nitrangan’ity fanafihana fiaraben’ny Brinks hanatitra tao amin’ny DAB amin’ny banky iray eny Amoronakona ka efa narahin’ireto jiolahy tamin’ny moto BWS iray. Tsikaritry ny zandary niambina teny an-toerana sy ao anatin’ny hetsika « Papango » izany ka nitifitra avy hatrany ireo jiolahy nanafika ilay fiaraben’ny orinasa Brinks. Vokany, lavon’ny zandary ny jiolahy roa.
Tratran’ny zandary koa i Rams na Petit mpanao kidnapping…
Voasambotry ny zandary koa ny jiolahy raindahiny amin’ny fanaovana “kidnapping” antsoina hoe Rams na Petit. Tratra tao Soaranokely, kaominina ambanivohitr’Ambohijanaka ity jiolahy ity raha ny tatitra nampitain’ny zandarimariam-pirenena hatrany. voalazan’ny fampitam-baovaon’ny zandary hatrany fa naman’ilay jiolahy mpaka an-keriny antsoina hoe Boly ity jiolahy ity. Tompon’antoka tamin’ny fakana an-keriny ny tompon’ny tranombarotra mpamongady iray eny Isoty ry zalahy ireto. Teo koa ny tompon’ny Metaplasco eny Ampasampito, ny tompon’ny tranombarotra iray Tsaralalana, ny karana iray tompon’ny fivarotana kojakojana fiarakodia eny Besarety ary ny ny karana tompon’ny hotely Mellis Analakely. Mitohy ny fanadihadiana ataon’ny zandary momba ity raharaha fakana an-keriny ity.